Showing ३१-४० of ९,२८८ items.
यासोक/पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा आवासीय भवन निर्माण हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा क’म्मायकको केन्द्रमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । प्रदेश सरकारको ८५ लाखमा निर्माण हुने भवनको सर्वेक्षण शुरु गरिएको छ । गाउँपालिकामा आवासीय भवन निर्माणपछि सभा, सम्मेलन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने कम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए । यसैगरी मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पनि आवासीय भवन निर्माण हुने भएको छ । भवन निर्माणका लागि ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दुवै गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण ह’न लागेको हो ।
ताप्लेजुङका किसान धान थन्क्याउनमै व्यस्त
ताप्लेजुङ/ ताप्लेजुङका कृषक धान थन्क्याउन व्यस्त छन् । अधिकांश ठाउँमा धान काटेर सकिएको र अहिले खलो (धान झार्न र पराल दाइँ गर्न खेतलाई सफा गरेर बनाइएको स्थल) मा भेला गरेर झार्ने, दाइँ गर्ने काम भइरहेको कृषकहरूको भनाइ छ । ‘काटेर सकियो, सुकेको धानको बोटलाई भेला गरेर बिटा बाँध्ने, खलामा जम्मा गरेर धान झार्ने अनि पराललाई दाइँ गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ फुङलिङका नगरपालिका–२ का कृषक कृष्णप्रसाद पालुङ्वाले भने । यस वर्ष गत वर्षभन्दा राम्रो धान फलेको कृषकहरू बताउँछन् । पानी पर्याप्त परेर समयमै रोप्न पाएको र रोग नलागेको हुँदा धान राम्रो फलेको मेरिङ्देन गाउँपालिकाका कृषक हर्क लिम्बूले ब
पाँचथर/ फाल्गुनन्द गाउँपालिकार–५, घुर्बिसे पञ्चमी बजारमा आयोजित ‘घुर्बिसे पञ्चमी गोल्डकप’ यो सिजनमा सम्पन्न जिल्लाको पछिल्लो फुटबल प्रतियोगिता हो । प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा अफ्रिकन मूलका विदेशी खेलाडीको खेल हेरेर स्थानीय फुटबलप्रेमी दङ्ग परे । आइभरिकोष्टका दुई खेलाडीसहित मैदान उत्रेको स्थानीय फाक्तेप खेलकुद परिषद्ले एक लाख एक हजार २ सय २२ रुपैंयाँ पुरस्कार राशीको प्रतियोगिताको उपाधि उचाल्यो । घुर्बिसे पञ्चमी गोल्डकप जिल्लामा यो सिजनमा सम्पन्न सातौं प्रतियोगिता हो । पछिल्लो समय जिल्लामा फुटबल प्रतिको क्रेज बढ्दो छ । सदरमुकामदेखि टाढाका गाउँ–गाउँमा स्थानीय क्लबले
रकम अभावमा बनेन नमूना बस्ती
दमक/ २०७३ सालमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका १० घर मिस्त्री परिवारले अझैसम्म राहत पाएका छैनन् । मिस्त्री परिवारलाई आवास बनाएर राख्ने जिम्मा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले अझैसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन । कमल–१ सरनपाडामा स्थानीय एक समाजिक व्यक्तिले दान गरेको ३ कट्ठा जमिनमा नमुना घर बनाउने भने पनि घोषणामा मात्र सिमित भएको छ । घोषणा गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर काम भने एक भाग पनि भएको छैन । स्थानीय दुर्गा मिस्त्री भन्छन् ‘खै हामीलाई देखाएर अरुले नाम कमाउन खोजेका हुन कि’ ? उनले तीन परिवारलाई हुने गरी एउटा भवन चाहिँ बनाएको तर यसको काम पूरा नभइसकेको बताए । &ls
तेह्रथुम/ सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले लालीगुराँस नगरपालिकामा निर्माण गरिएको चोलुङ (सिद्धि प्राप्ति) पार्क पर्यटकको विशेष गन्तव्य बन्न थालेको छ । लिम्बू समुदायको मौलिकतासँग जोडेर ढुङ्गामात्र प्रयोग गरेर बनाइको यो पार्कमा घुम्न तथा हेर्नका लागि दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आउन थालेका छन् । लिम्बू भाषामा ‘चो’ को अर्थ लक्ष्य र ‘लुङ’ को अर्थ ढुङ्गा हुन्छ । यसअर्थमा यो चोत्लुङ पार्कको विशेषता भनेको ढुङ्गाको सभ्यता हो । आदिमकालदेखि आफ्नै भाषा, लीपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रितिरिवाज रहेको लिम्बू जातिमा ढुङ्गाको छुट्टै महत्व रहेको र यसको पुरातात्विक सभ्
४१ वर्षपछि मोहियानी हकले क्याम्पस तरङ्गित
विजयपुर / महेन्द्र बहुुमुखी क्याम्पस धरानको स्रेस्ता रहेको जग्गा ४१ वर्षपछि मोहियानी हकको माग दाबी गरिएपछि नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ । धरान उपमहानगर–११ पानीट्यान्कीमा रहेको १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा धरान–१६ का यज्ञबहादुर घिमिरेले मोहियानी हक दाबी गरेका हुन् । जग्गाको धनीपूर्जा प्रमाणपत्रको स्रेस्तामा मोहियानी बाबु डम्बरबहादुर घिमिरेकोे नाम उल्लेख भएको भन्दै यज्ञबहादुरले धरान–११ नम्बर वडा कार्यालयमार्फत् सर्जिविन मुचुल्कासहित नाता प्रमाणित गरी मोही नामसारी गराउन भन्दै भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीमा सिफारिस गरेपछि तरङ्ग पैदा भएको हो । २०१२ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्याल
विजयपुर / धरानमा जारी दोस्रो मेयरकप स्कुल ओलम्पीक अन्र्तगतविहिबार विहिबार भएको कबड्डी खेलको फाइनल खेलमा केके इन्टरनेशनल स्कुलले स्वर्ण पदक जितेको छ । कवड्डीमा सुनाखरीले कास्य पदक जितेको छ भने धरान लिगामेन्ट स्कुलले रजत पदक जितेको छ । कवड्डी खेलका संयोजक तरुणकुमार यादबका अनुसार धरानका १८ वटा विद्यालयले कबडडी खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । यो सँग मेयरकप स्कुल ओलम्पीकका आठ ओटा खेलहरु सम्पन्न भएका छन् ।‘ अब फुटबल,क्रिकेट,कराँते र टेवलटेनीस खेलको मात्र फाईनल खेल हुन बाँकी छ ’ नगर खेलकुद विकास समितीका अध्यक्ष सुवास राईले भने । उनका अनुसार प्रत्येक खेलको फाइनल खेलसँगै खेलाडीहरुलाई पदक वित
दमक बजारलाई बिरुवा सहित गमला बितरण
दमक/ झापाको दमकले हरित नगर समृद्ध नगर भनेर अभियान चलाईरहेको छ । यस अभियान अन्तर्गत नगरका हरेक टोल टोलमा बृक्षारोपण गरि हरियाली बनाउने नगरको लक्ष्य छ । जसका लागि नगरले २ करोडको लगानीमा दमक ३ मा नर्सरीनै लगाएको पनि छ । सो नर्ससरीमा उत्पादन भएका बिरुवाले नगर हरियाली हुने नगर श्रोतले जनाएको छ । तर नगरको यो अभियानलाई थप सहयोग गर्न नगरभित्र रहेका बिभिन्न सघं सस्थाहरुले पनि साथ दिइ रहेका छन् । बिहिबार दमकमा रहेको गोल्डेन बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले विरुवा सहित ४० वटा गमला बितरण गरेको छ । दमक ६ मा रहेको महाविर टोल बिकास समितीलाई सस्थाले धुपीका बिरुवा सहित गमला बितरण गरेको हो । वडा नं ६ को समन्वय
विवादकाबीच कार्यविधि पारित
दमक/जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारण झापाको गौरादह नगरपालिकाका मेयरले बैठक छाडेपछि उपमेयरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चारवटा कार्यविधि पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले चारवटा कार्यविधि पास गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैठकमा नगर प्रमुख रोहितकुमार साह एजेण्डामा छलफल नगरी तत्काल पारित गर्न नसक्ने अडान राखेपछि जनप्रतिनिधिबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादपछि प्रमुख साहले बैठक स्थगन गर्दै बाहिरिएपछि बहुमतले उपप्रमुखको अध्यक्षतामा पुनः बैठक बस्दै निर्णय पारित गरेको हो । उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरू प्रमुखले नगरपालिकालाई बन्धक बनाउने प्रयास गर्न पाइन्न भन्दै प्रमुख साहलाई दवाव दिएपछि बाहिरिएक
स्वर्ण जित्नेमा डिपो मावि अग्रस्थानमा
विजयपुर/ धरानमा जारी दोस्रो मेयरकप स्कुल ओलम्पिकमा डिपो माविले ९ स्वर्ण जित्दे शीर्ष स्थानमा रहेको छ । हालसम्म सात खेल सम्पन्न भएका छन् । ओलम्पिकमा १२ खेल समावेश गरिएका छन् । जसमध्ये तेक्वान्दो, एथ्लेटीक्स, भलिबल, ब्याडमिन्टन, बुद्धिचाल, बास्केटवल, र सेपाकताक्रो खेल सम्पन्न भएका हुन् । नगर खेलकुद विकास समितिका अनुसार डिपो माविले ९ स्वर्ण, ५ रजत र २ कास्य पदकसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ । ९ स्वर्ण, २ रजत र १२ कास्य जितेको सैनिक आवासीय मावि दोस्रो स्थानमा छ । ४ स्वर्ण,४ रजत ३ कास्य जितेको नवज्योती स्क’ल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । ४ स्वर्ण, २ रजत र १ कास्य पदक सहित शारदा वालिका मावि च